magaalada Oslo ee dalka Norway. 27 - 28 November, 2013
Kulankan oo ka dhacay maalintii ay taariikhdu ay aheyd 28kii bishan November, sanadka 2013, waxaa ka soo qeybgalay Qoreyaal Soomaaliyeed oo ka kala yimid magaalooyinka London, Stockholm ee dalalka Ingiriiska & Sweden.
SBarnaamijkan waxaa soo qabanqaabiyay guddoomiyaha ururka SOMDOS, C/wahaab Max’ed Siciid oo halkaasi ka jeediyay hadallo soo dhaweyn & ammaan kuna aaddanaa sida ay Qoreyaasha Soomaaliyeed uga aqbaleen ka soo qeybgalka bandhiggan oo ahaa kii ugu ballaarnaa ee noociisa ah ee lagu qabto magaalada Oslo ee dalka Norway.
Sidoo kale waxaa iyadna halkaasi hadallo qiimo badan ka soo jeedisay Luul Xassan Kulmiye oo ka mid aheyd qabanqaabiyeyaasha bandhiggan buugaagta & dhaqanka Soomaalida ahna madaxa Manager at Kulmiye Language service.
1. Cumar Xaaji Bile Aaden
2. C/casiis Cali Ibrahim Xildhiban
3. Saciid Cali Shire
4. Seynab Xaaji Aaden Daahir
5. C/raxmaan Max’ed Abtidoon
Guntii & gebagabadii wuxuu C/wahaab Max’ed Siciid & dadka ku dhaqan magaalada Oslo ee dalka Norway, casho sharaf si wanaagsan loo soo agaasimay ugu sameeyeen Restaurant Waaberi oo ku yaalla magaaladaasi, halkaasi oo ay isku dhaafsadeen aqoon is weyrdaarsi aad u qiimo badan.
C/wahaab Max'ed Siciid
Saciid Cali Shire & Max'ed Cabdi "Affey"